Corona: CCXP Cologne 2021 haina kuitika - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Dec 4, 2020 | CCXP Cologne, nhau, Other, Events
Iyo CCXP Cologne 25 inofanira kuitika kubva munaJune 27 kusvika 2021th, 2021. Hapana chichabuda pazviri. Sezvo varongi vazivisa, iyo yeGerman offshoot yeCCXP ichamiswa zvakare gore rinouya. Zvikonzero zveizvi? Corona.
"Mushure mekunyatsofungisisa isu taita sarudzo yakaoma yekumisa chiitiko zvakare mugore rinouya," anodaro murongi weCCXP Cologne 2021. Gore rino, CCXP Cologne yaifanira kubviswa nekuda kwezvikonzero zvinonzwisisika, sehurumende yemubatanidzwa neyenyika. Kuve nedenda re coronavirus rakasarudza kurambidza zviitiko zvikuru panguva yekutanga. Varongi vakati pakange pasina kurongeka kwekuchengetedza, izvo zvinogona kunge zviri chikonzero chekuti zororo idzva riitwe gore rinouya.
Muna 2019 iyo CCXP Cologne yakapemberera kutanga kwayo muCologne mahoro ekuratidzira sechibviro cheiyo yakakurumbira yeSouth America CCXP. Maonero kubva kune yekutanga kusanganisira iyo mafoto akateedzana anogona kuwanikwa pano: CCXP Cologne 2019: Kubudirira kutanga - nzvimbo yekuvandudza yasara • Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo.
CCXP Cologne inofanirwa kunge iri "mabiko makuru evateveri"
Kukanzurwa hakuuyi sechishamiso, kune zviitiko zvakawanda parizvino hazvizivikanwe kana uye nenzira ipi zvichaitika mugore rinouya. Zvichakadaro, varongi veCCXP vakagadzira imwe nzira munguva pfupi gore rino, iyo in Chimiro chemakwikwi e cosplay, chimwe chezviitiko zvepakati zveCCXP Cologne.
Chikonzero chekukanzurwa kweCCXP Cologne 2021 chakavakirwa pachokwadi chekuti Cologne Convention yakaitwa sechiitiko chekutengeserana pasaiti ine munhu anomanikidza, kuchinjana kwepfungwa, inotsanangura timu yechiitiko ichi: "Chiitiko chedu chinofanirwa kunge chiri chiitiko. Mabiko makuru evateveri, maartist, Iva vanozivikanwa uye vadyidzani - izvo zvaunonyora mukarenda izere netarisiro, sangana neshamwari, fambai kuCologne pamwe chete uye mupedze nguva isingakanganwike ikoko. "
Naizvozvo tinoda kumirira denda [...]
CCXP Cologne timu
Nekudaro, izvi ndizvo chaizvo izvo parizvino zvisinganyatso kujeka nekuda kwedenda rekorona. Uchatokwanisa kufamba chero kupi zvako gore rinouya? Zviitiko zvikuru zvichakwanisa kuitika here? Vanhu vanotenderwa kusangana munzvimbo dzinoungana vanhu here? Unogona kuchengeta zuva rechiitiko kana ukariseta izvozvi?
Sarudzo yekukanzura CCXP Cologne 2021 inogona kunetsa kune vateveri, asi pasi pemamiriro azvino zvinonzwisisika. "Mumamiriro ezvinhu aripo iye zvino, hationi hwaro hwekuitwa kweCCXP Cologne iri kuitika panzvimbo, kana nguva izere nekutarisira chiitiko chiri kuuya," vakadaro varongi. Vanoda kumirira denda kutanga, kuitira kuti vazokwanisa "kutarisira chiitiko chikuru chine simba rizere uye kuzvipira kaviri".
Wadiwa coronavirus ... izvi! Mufananidzo: André Volkmann
Pakati pemitsetse ye "Saka tinoda kumirira denda" pamwe zvakare: Tichabata CCXP Cologne kana Corona ichibvumira. Izvozvi hazvizivikanwe kana izvo zvichave muna 2022. Zvisinei, zvinogona kufungidzirwa kuti varongi vachapa ruzivo rwakakodzera munguva yakanaka.
"Tinovimba kuti munogona kunzwisisa sarudzo yedu uye kutenda matiri kunyangwe munguva dzino dzakaoma", varongi vanotaura kune vateveri. Panzvimbo pechiziviso chikuru chekutengeserana, pane nyaradzo yevateveri vanofanirwa kuita pasina CCXP Cologne zvakare: "Kukuzivisai kuti vatinoshanda navo uye isu tichiripo nokuda kwenyu, tine zvimwe zvinoshamisa zveKisimusi zvatakamirira. kwauri muna December. Saka, kune vese veXMas Avenger: Ungana!
Kare Fitness Boxing 2 yeNintendo Shandura iri pano: "Rhythm & Exercise" pamberi peTV.
Inotevera Crowdfunding paKickstarter: Bhodhi mutambo wenhevedzano Vakomana vari kumhanya
Jorodhani Peele: Zvinotyisa Zvinodzokororwa Huya Kumba Yevakakanganwa uye Candyman
Mutambo wegore ra2020: Iyo yekugadzira bhodhi mutambo Mifananidzo inohwina pawn
Muedzo weStreet Power Bhora yePS4: Inonakidza kick ine retro zvinhu
Stinger's Debut: Kwidziridzo yeEverspace 2 iri pano